China XY-5483P ရွှေရောင်သတ္တုထည်ထည်ခွဲစက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ။ | Shuolong
ဓာတ်လှေကား & အတွင်းပိုင်းနံရံအဝတ်သတ္တုထည်
အတွင်းပိုင်း Partition ကိုကွက်
XY-5483P ရွှေရောင်သတ္တုအထည်အလိပ် Divider
အလေးချိန် ၅.၆ kg / m2
ဖွင့်လှစ်သည့်နေရာ - ၂၇.၃%
ကွက်အထူ: ၃.၃ မီလီမီတာ
မျက်နှာပြင်ကုသမှု - ဆေးသုတ်ခြင်း
အမြင့်အရှည်: 8 မီတာ
SHUOLONG ဗိသုကာကွက်၏မျက်နှာပြင်နှင့်အခန်းခွဲစက်များသည်အဆောက်အ ဦး ၏ပုံမှန်သိမ်းပိုက်ထားသောareasရိယာများသို့မိုlight်းလင်းစေခြင်းနှင့်ခရက်ဒစ်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ရွေးချယ်ထားသောကွက်လပ်ပုံစံပေါ် မူတည်၍ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်ပြောင်ပြောင်တောက်သောအလင်းကိုလျှော့ချပေးသည်။ Interior shading applications များသည်မကြာခဏပြတင်းပေါက်ကုသမှုများသို့မဟုတ်အခြားထူးခြားသောအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းပုံစံများဖြစ်သည်။
ကြာမြင့်ချိန်: ၁၄-၂၁ ရက်ပေါင်း
ဒီဇိုင်းပိုများလာပြီးသတ္တုကွက်များကိုသူတို့၏ဗိသုကာဒီဇိုင်းတွင်အရေးကြီးသောအရာအဖြစ်ရွေးချယ်သည်။ သတ္တုကွက်၏ပုံစံကိုတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ၊ ဒီဇိုင်းစီမံကိန်းတစ်ခုစီ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ design သည် design ကိုလှပပြီးလက်တွေ့ကျစေရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးသတ္တုကွက်ကလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဗိသုကာကွက်များ၏ပွင့်လင်းမြင်သာသဘာဝလေဝင်လေထွက်ပေးစွမ်းသည်။ စီမံကိန်းအတွက်လိုအပ်သောလေဝင်လေထွက်လိုအပ်ချက်များအတွက်သင်ရွေးချယ်ထားသောကွက်လပ်၏openရိယာကိုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ Architectural Mesh သည်ထိရောက်သောနေကာကွယ်မှုကိုပေးသည်။ နေရောင်ခြည်ကိုစစ်ထုတ်ခြင်းနှင့်အဆောက်အ ဦး အတွင်းရှိအပူကိုသိသိသာသာလျှော့ချခြင်း။
ဘာ''s ကိုပိုအကယ်၍ သင်သည်သင်၏လက်ရှိသို့မဟုတ်လာမည့်စီမံကိန်းများအတွက်သတ္တုကွက်ဒီဇိုင်းဒြပ်စင်များကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များနှင့်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်းထောက်ပံ့နိုင်သည်
သင်၏စီမံကိန်းလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီသင့်လျော်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဖြောင့်သောရထားလား၊ သို့မဟုတ်အဖြစ်များတတ်သည်နှင့်အတူကွေးသောရထားဖြစ်စေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ SHUOLONG ကသင့်ကိုနားလည်ရန်ကူညီပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးပေးသည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏အထူမှာအနည်းဆုံး ၂ မီလီမီတာရှိပြီး၊ သင်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ သင်သံသယများကိုဖြေရန်ပိုမိုအသေးစိတ်ကျသောတပ်ဆင်မှုဗီဒီယိုကိုသင့်အားပေးမည်။
1. ထုပ်ပိုးဗိသုကာကွက်များအတွက်အလွန် impost ဖြစ်ပါသည်, ကောင်းသောထုပ်ပိုးထိရောက်စွာဖောက်သည်ဖို့ကွက်မှရရှိရန်ထုတ်ကုန်ထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောကွက်အမျိုးအစားများ, အရွယ်အစားနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများအရ, SHUOLONG အမိန့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ကောင်းသောအထုပ်ပါစေ။ အရင်းအမြစ်ရှာဖွေခြင်းလိုအပ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်။ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာ။
၂။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပုံစံအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် TNT၊ FedEx, UPS, DHL စသည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမြန် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီးပင်လယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုလည်းပေးနိုင်ပါသည်။
အရွယ်အစား - ၃ ။
၁) စက္ကူဖြင့်ထုပ်ပိုးသည့်တစ်ခုချင်းစီ၊ သစ်သားသေတ္တာတစ်ခုထဲမှ ၁-၅ ကောင်၊
Hebei Shuolong Metal Products Co. , Ltd။ သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောတရုတ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီးဗိသုကာဆိုင်ရာနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ယက်လုပ်သတ္တုဝါယာကြိုးများကိုထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းကိုပြင်ပမျက်နှာစာများ၊ Balustrades၊ လှေကားခင်းခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်များ၊ နေမျက်နှာပြင်များနှင့်မျက်နှာကျက်၊ အတွင်းပိုင်း၊ သတ္တုကုလားကာများ၊
သင်၏ပရောဂျက်လိုအပ်ချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောအရည်အသွေးမြင့်မားပြီးထူးခြားသည့်ဗိသုကာဆိုင်ရာကွက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ယက်နိုင်သည်။ သတ္တုအမျိုးအစားများ၊ ဝါယာကြိုးအချင်း၊ အစေးနှင့် crimping အမျိုးအစားများအကြောင်းနောက်ခံသတင်းအချက်အလက်အနည်းငယ်ဖြင့်သင်၏ mesh installation ကိုသင်၏ဒီဇိုင်း၏ကျန်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အပြည့်အဝအဆင်ပြေစေရန်သင်လိုအပ်သည့်အတိအကျကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်အလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်သည်။ သင်ကြီးသည်ဖြစ်စေ၊ သေးငယ်သည်ဖြစ်စေရိုးရှင်းသောသို့မဟုတ်စိတ်တိုင်းကျဒီဇိုင်းကိုသင်ရှာဖွေနေသည်ဖြစ်စေ၊ သင်၏နောက်စီမံကိန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ရာစုနှစ်ဝက်နီးပါးသမိုင်းကြောင်းရှိဝါယာကြိုးကြိုးထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့် SHUOLONG သည်အမှာစာတိုင်းအတွက်အရည်အသွေးကိုထိန်းချုပ်ရန်လုံလောက်သောစွမ်းရည်ရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝါယာကြိုးကွက်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်တိုက်ရိုက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များမှာရုံဝါယာကြိုးကွက်လုပ်ပါ!
၁ ။အနှစ် ၄၀ အတွေ့အကြုံ : နှစ်ပေါင်း 40 ကျော်ဝါယာကြိုးကွက်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံကို။
၂ ။အရည်အသွေးအာမခံချက် - အမှာစာတစ်ခုစီကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဆင့်ထက်မြင့်မားသောစံနှုန်းအရတင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ထားသည်။
၃ ။စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှု: ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိစတိုင်များအပြင်ငါတို့သည်သင်တို့၏ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များကိုအဘို့အစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်
၄ ။အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း: အခြားကုမ္ပဏီများမှသင့်အားပေးသောမည်သည့်နမူနာသို့မဟုတ်မည်သည့်ကိုယ်စားပြုချက်မဆိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကိုက်ညီမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသောကတိကဝတ်ကိုအသုံးချရန်အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှစာတစ်စောင်ပို့ပေးပါ။ သူတို့၏စျေးနှုန်းကိုအနည်းဆုံး ၁၀% ဖြင့်ကျော်ဖြတ်ပါမည်။
သငျသညျအမှာစာချင်သို့မဟုတ်ငါတို့သတ္တုကွက်၏အသေးစိတျပိုသိလိုလျှင်, ငါတို့ website တွင်သင်၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုပို့ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ ၂၄ နာရီအတွင်းသင့်အားပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါမည်။
ရှေ့သို့ XY-5127 မျက်နှာစာခင်းခြင်းအတွက်ဗိသုကာဆိုင်ရာကွက် (၁)
နောက်တစ်ခု: XY-5483 သတ္တုအထည်အပိုင်းအစ
အဆောက်အ ဦး မျက်နှာစာများအတွက်သတ္တုထည်
အာကာသ partition ကိုများအတွက်သတ္တုအထည်
XY-2510 Deco သတ္တုဗိသုကာဆိုင်ရာအ ...
XY-8914G ရှေးဟောင်းကြေးဝါသတ္တု Divider
XY-M3676 သတ္တုကွက် Partitions ကို
Decorartive မျက်နှာပြင်အဘို့အ XY-2222 သတ္တုကွက်အထည်
Featured ထုတ်ကုန်များ, Sitemap, ထုတ်ကုန်အားလုံး